WINE 6.10 inosvika neMono 6.2.0 uye inopfuura 300 shanduko | Linux Vakapindwa muropa
WINE 6.10 inosvika neMono 6.2.0 uye inopfuura 300 shanduko
Kufanana nemavhiki maviri ega ega, uye neiyo yeSwitzerland chaiyo inozviratidza, WineHQ yadzokororazve vhezheni yesoftware yekumhanyisa maapplication eWindows pane mamwe masisitimu anoshanda, senge iwo akavakirwa paLinux, iri dingindira repakati reLxA. Ivo vangangodaro vasingachengetedze nguva zvakanyanya isu, asi ivo vakatipa WAINI 6.10 nezuro Chishanu masikati, zuva rimwe chetero uye panguva imwe cheteyo senguva dzose.
Semazuva ese, WineHQ yataura chete shanduko shoma seyakanyanya kukosha, pakati payo ndingaratidza kuti Mono injini yakagadziridzwa kuita vhezheni 6.2.0. Kune vamwe vese, vakagadzirisa zvikanganiso makumi maviri neshanu uye vakaunza a huwandu hweshanduko gumi. Pazasi iwe une runyorwa diki rwezvinhu zvitsva izvo WineHQ inofunga kuti ndiyo chishongo mukorona yeWINE 6.10.
WINE 6.10 inosimbisa
Mono injini yakagadziridzwa kuita vhezheni 6.2.0, iine kumusoro kwenyowani.
Iyo Shell folda yekutumidza zita inotevera inotevera Windows yekutanga.
WainiPulse raibhurari yakashandurwa kuita PE.
Mamwe Musl math anoshanda mune iyo C nguva yekumhanya.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.10 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 6.11, uye ichave ichasvika zvirokwazvo Chishanu chinotevera, Chikumi 18, kunyangwe isu tichigona kuiburitsa zvishoma gare gare. Pakati pezvauchasuma, chinhu chega chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kururamisa senguva dzose, kunyangwe ivo vachigona zvakare kuramba vachivandudza izvo zviripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.10 inosvika neMono 6.2.0 uye inopfuura 300 shanduko
Valve inoshanda pane inotakurika Linux-yakavakirwa koni